OpIikopi zifunda ukuRhweba 2 kwi-eToro SIMAHLA! Isikhokelo se2021 kuShishino lweKopi
Ipotifoliyo yokuThengisa ngokuKhuphela ngokuFunda 2 yoRhwebo-Landela iQela lethu lokuThengisa ngaphakathi kwiNdlu! 2021
Ukuhlaziywa: 16 Juni 2021
Umxholo awusebenzi kubasebenzisi base-US.
Umsebenzi weKopi wokuThengisa ofumanekayo kwi-eToro awuyonto imfutshane kuguquko. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha umrhwebi oyithandayo inkangeleko yakhe, uthathe isigqibo sokuba unqwenela ukutyala imali engakanani-yiyo loo nto-unokuhlala phantsi kwaye wonwabele umvuzo ongenanto.
If kuphela yayilula ngolo hlobo.
Ngale nto, sithetha ukuba i-eToro ilikhaya labarhwebi abangaphezu kwezigidi ezili-12 - nto leyo eyenza kube nzima ukwahlula ingqolowa kumququ. Iindaba ezimnandi kuwe kukuba iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlini lisandula ukujoyina imeko ye-eToro Copy Trading.
Funda ukuze ufumanise ukuba ungabalinganisa njani abathengisi abanamava bathanda ukuthanda kunye nokwenza inzuzo xa sizuza!
Qaphela: Zonke iindlela zokurhweba zithwala umngcipheko. Akukho siqinisekiso sokuba uyakwenza inzuzo ngokulandela iqela lethu labarhwebi. Ngokuchasene noko, kukho lonke ithuba lokudibana neelahleko.
Funda ipotifoliyo yokuRhweba ngeeKopi ezi-2 eToro
Khuphela ukuthenga kwethu kunye nokuthengisa indawo ezinje nge-eToro
Ukurhweba ngokukuko kwiimarike zezemali ngendlela engenzi nto
Mirror iqela lethu labarhwebi abangaphakathi endlwini
Joyina inkonzo yethu yokukhutshelwa kwephothifoliyo SIMAHLA!
Khuphela Funda uRhwebo 2 kwi-eToro
Iipesenti ezingama-75 zeeakhawunti zotyalo mali zilahleka xa kuthengiswa iiCFD kunye nalo mboneleli. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba unganakho na ukuthatha umngcipheko omkhulu wokulahleka kwemali yakho.
Yintoni ukuThengisa ngeToro?
Umsebenzi weKopi wokuThengisa sisixhobo esidumileyo esinikezelwa ngumrhwebi okwi-Intanethi eToro. Ngamafutshane, ikuvumela ukuba 'ukope' umrhwebi onamava osebenzisa iqonga le-eToro. Ekuqaleni, uya kukopa iphothifoliyo yabo efana nezinto ezifana nazo.
Umzekelo, ukuba umrhwebi uneepesenti ezingama-40 zepotifoliyo yakhe kwizitokhwe zikaApple, njengoko uza kwenza. Ukuba umrhwebi une-20% kwi igolide kunye ne-15% kwi irhasi yendalo, njengoko uya kuthanda. Ngapha koko- kwaye okona kubaluleke kakhulu, unokukhetha ukukopa umrhwebi kwifayile ye- oluqhubekayo basis.
Oko kukuthi, ukuba umrhwebi uphuma kwisikhundla, njengoko uya kwenza. Ukuba umrhwebi ofanayo wongeza i entsha asethi kwiphothifoliyo yabo - kwakhona, njengoko uya kwenjenjalo. Kwithiyori, oku kuthetha ukuba unokurhweba ngokusebenzayo kwi-Intanethi.
Endaweni yoko, umrhwebi wekopi oyikhethileyo uya kugqiba ukuba yeyiphi na impahla oza kuyithenga, kwaye nini. Banokumisela kwakhona ukuba ingakanani ipotifoliyo abanokuyabela iiasethi nganye, kwaye ngokuqinisekileyo-bayithengisa nini. Eyona nto ilunge kakhulu, i-eToro ikuvumela ukuba usebenzise eli nqaku ngolona mali lincinci lwe- $ 200- kwaye akukho ntlawulo yongezelelweyo isebenza.
Usebenza njani uTrhwebo lweeKopi
Inkqubo yokuRhweba ngeKopi ngokwayo ithe ngqo phambili. Elona candelo linzima kukwazi indlela yokukhetha umrhwebi oza kukwenza uzuze ingeniso engaguquguqukiyo. Emva kwayo yonke loo nto, intsebenzo edlulileyo ayisokuze ibe sisalathiso somlilo ngokuqinisekileyo kwiziphumo zexesha elizayo.
Nangona kunjalo, inkqubo yotyalo-mali yokuphela isebenza njengezantsi:
Inyathelo 1: Khetha uMrhwebi weKopi
Izibuko lakho lokuqala lokufowuna liya kuba kukukhetha umrhwebi oza kukopa. Nangona iqonga le-eToro likhaya labatyali mali abangaphezu kwezigidi ezili-12, ayingabo bonke abasebenzisi abasayiniweyo kwinkqubo yeKopi yoMrhwebi. Ngale nto ithethwayo, kusekho amawaka abarhwebi abanokukhetha kubo, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze umsebenzi wesikolo.
Intsebenzo yangaphambili ayibonisi iziphumo ezizayo.
Ezinye zeemetrikhi i-eToro ekuvumela ukuba ujonge malunga nomrhwebi zezi:
Umsebenzi weMbali: Xa ucofa iprofayile ye-eToro Copy Trader, unokujonga imeko nganye ebekwe ngumtyalomali. Kananjalo, unembonakalo ecacileyo yendlela umrhwebi ayenzileyo okoko wajoyina iqonga. Oku kunokujongwa kwinyanga nenyanga-eluncedo kakhulu.
Iimpahla ezikhethiweyo: Unokujonga kwakhona udidi lweeasethi olukhethiweyo umrhwebi athanda ukuqikelela kulo. Umzekelo, ngelixa abanye abathengisi bebambelela kwisitokhwe, abanye bajolise ngakumbi kwi-forex. Abanye abathengisi bangaphezulu kweJack yezoRhwebo zonke-egubungela iiklasi ezininzi zeeasethi.
Ukulinganisa umngcipheko: Itekhnoloji esisiseko sokwenza amandla eToro iyakwazi ukwakha umngcipheko kumngcipheko kwikopi nganye yomrhwebi. Oku kuqhutywa ukusuka ku-1 ngowona mngcipheko uphantsi, ukuya kuthi ga kwi-10. Oku kukuvumela ukuba unamathele kubarhwebi ababonisa inqanaba lomngcipheko oziva ukhululekile ukulithatha.
Ixesha lokurhweba: eToro ikwazisa inani eliqhelekileyo leentsuku (okanye iiyure) apho umrhwebi egcina indawo evulekile. Ngelixa oku kunokungavakali njengeetriki ebalulekileyo-kunjalo. Emva kwayo yonke loo nto, ngelixa abanye abathengisi bethatha urhwebo usuku or Ukuguqula ukurhweba indlela, abanye banomdla ngakumbi kwisicwangciso sexesha elide.
Ii-asethi eziphantsi kolawulo: Unokujonga kwakhona inani labasebenzisi be-eToro okwangoku abakopa umrhwebi ekuthethwa ngaye. Ukongeza, oku kukwazisa ukuba ingakanani imali anayo umrhwebi phantsi kolawulo. Ekugqibeleni, abarhwebi abaphambili be-eToro bahlala benemfumba yabalandeli.
Njengoko ubona koku kungasentla, zininzi iindlela zokulinganisa ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ukhetha umrhwebi wekopi eToro.
Inyathelo 2: Yahlula Iimali
Nje ukuba ukhethe umrhwebi ekopi ye-eToro oyithandayo inkangeleko yakho, uya kuthi emva koko ucelwe ukuba wabele enye imali eseleyo kwiakhawunti yakho. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, oku kufuneka okungenani kube ngama- $ 200.
Ukongeza, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukukopa umrhwebi kwifayile ye- oluqhubekayo isiseko, okanye khuphela kuphela iphothifoliyo leyo okwangoku unayo.
Ngokombono wethu, akukho ndawo ingako yokukhetha le yokugqibela. Emva kwayo yonke loo nto, awuyi kuxhamla kuthengiso oluqhubekayo lokuthengisa kunye ne-odolo ezenziwa ngumrhwebi- oko kuthetha ukuba ungaphoswa ngamathuba okwenza inzuzo.
Nje ukuba uqinisekise ngotyalo-mali, i-eToro iyakutsala inani elichaphazelekayo kwimali yakho eseleyo. Ukuba usadidekile malunga nendlela 'yokukopa' icandelo lenkqubo esebenza, masijonge umzekelo okhawulezayo.
Masicinge ukuba umrhwebi wekopi yakho oyikhethileyo une- £ 100,000 yexabiso leeasethi kwiphothifoliyo yakhe
I- £ 25,000 ikwisitokhwe se-IBM (25%) kunye ne- £ 75,000 kwi-bond ETF (75%)
Ugqiba ekubeni utyale imali eyi- $ 1,000
Oku kuthetha ukuba i- £ 250 (25%) yephothifoliyo yakho iya kuba nee-stock ze-IBM kunye ne- £ 750 (75%) kwi-bond ye-ETF.
Njengoko ubona, akunamsebenzi ukuba unemali engakanani onayo - ipotifoliyo yakho yokuRhweba ngeKopi iya kulinganiswa njengemeko yomthengisi.
Inyathelo 3: Ukwenza imali
Xa kuziwa ekwenzeni imali, inqaku le-eToro Copy Trading alisebenzi kwahlukileyo kwisicwangciso esiliqili sokwenza utyalo-mali. Ngamanye amagama, iphothifoliyo yakho ikopi yekhabhoni yomrhwebi wakho omkhethileyo. Kananjalo, nayiphi na inzuzo eyenziwa ngumrhwebi- ngokwepesenti, iya kubonakala ngaphakathi akho ipotifoliyo.
Masicinge ukuba utyale imali eyi- $ 2,000 kumrhwebi wekopi ojolise ngokukodwa kwi-forex
Umrhwebi wabela iipesenti ezi-1 zepotifoliyo yakhe nge-GBP / USD yokuthenga i-odolo ye-30x
Kananjalo, oku kuthetha ukuba ubeka emngciphekweni i-20 yeedola kurhwebo, nangona kunjalo, kusetyenziswa i-30x leverage
Umrhwebi uvale indawo yakhe ye-GBP / ye-USD-ngokwenza i-0.5%
Ipotifoliyo yakho ibonakalisa urhwebo- oko kuthetha ukuba wenze i-0.5% yeedola ezingama-20- yona $ 0.10 nje (iidola ezingama-20 x 0.5%)
Nangona kunjalo, ubuye wabanegalelo le-1: 30 isetyenzisiwe-oko kuthetha ukuba wenze i $ 3
Nangona la manani angasentla emele imbuyekezo encinci, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba abathengisi bemihla ye-forex bahlala bebeka izikhundla ezininzi kulo lonke usuku. Kananjalo, imbuyekezo encinci inokudibanisa ngokukhawuleza.
Ke ngoku, ukuba uyazi ukuba kusebenza njani ukuRhweba ngeKopi, ngoku kufuneka sixoxe ngento enokubonelelwa nguRhwebo 2. Okokuqala nokuphambili, iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini bebesebenza kwimali kwaye yorhwebo indawo yokurhweba ngaphezulu kweminyaka eli-15.
Siyaziwa kwindawo yenkonzo yomqondiso-kunye namanye amalungu e-1,000 + asebenzisa iziphakamiso zethu zokuthengisa imihla ngemihla. Ngapha koko, iqela lethu lijolise kwinqanaba lokuphumelela ngaphezulu kwe-76%-yiyo loo nto sihlangabezana nokunyuka kokubhaliswa kweakhawunti.
Nangona kunjalo, i-Learn 2 Trade kutshanje ijoyine inkqubo ye-eToro Copy Trading ngesizathu esinye esibalulekileyo- ukuvumela amalungu ethu ukuba axhamle kwingeniso yemfundo. Emva kwayo yonke loo nto, iluncedo njenge-forex yethu, imveliso yorhwebo, kunye neempawu zedijithali yemali- kusafuneka ukuba wenze ngokuvisisana nengcebiso nganye.
Ngapha koko-kwaye mhlawumbi okona kubalulekileyo, imiqondiso ihlala ifuna ukwenziwa kanye ngalo mzuzu zifunyenwe. Emva kwayo yonke loo nto, iimarike zezemali zinokuhamba ngesantya esikhawulezayo. Kananjalo, oku kuthetha ukuba amanye amalungu ethu aphoswa ngamathuba okwenza inzuzo.
U-Que-ipotifoliyo yoRhwebo lokuKhuphela ukuRhweba 2!
Ngamafutshane, ngoku unethuba lokujonga ukuthengisa kunye nokuthengisa izikhundla zabathengisi bethu abangaphakathi ezindlwini. Ukuba abathengisi bethu bathenga i-EUR / USD-njengokuba nawe uza kwenza njalo. Ukuba abathengisi bethu bathengisa i-AUD / NZD-kwakhona, njengoko uya kwenza.
Ngokwendlela yethu yokurhweba, oku kusebenza ngokufanayo kunye neengcebiso zethu zomqondiso. Kwabo abangaziyo, oku kuthetha ukuba sihlala sithatha umngcipheko / umvuzo we-1: 3.
Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba ngokubeka esichengeni i-1% yenkunzi yethu, siza kuma sizuze i-3%. Ewe kunjalo, oku kufezekiswa ngokufaka ilahleko yokumisa kunye nokuthatha inzuzo kuyo yonke imisebenzi yethu. Kwakhona, ngokusikopa kwi-eToro-awudingi ukuba nexhala nge-odolo nganye-njengoko yonke into izenzekelayo.
Ungakukopa njani Funda ngoRhwebo 2 SIMAHLA
Ngaba isandi sokukopa iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini ngeqonga le-eToro? Ukuba kunjalo, landela amanyathelo angezantsi ukuze uqalise ngoku!
1. Vula iAkhawunti ngekhonkco lethu elikhethekileyo
Ukufumana ukuqengqeleka kwebhola, kuya kufuneka uvule iakhawunti kunye ne-eToro ngekhonkco lethu elikhethekileyo.
Ungaya ngqo kwiphepha elifanelekileyo nge cofa ikhonkco apha.
Nje ukuba ufike kwiwebhusayithi ye-eToro, qala inkqubo yobhaliso. Oku kuyakufuna iinkcukacha zakho kunye neenkcukacha zonxibelelwano- ezinje:
Uya kudinga ukwenza igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo.
Qaphela: Ukuba sele unayo iakhawunti nge-eToro kwaye unqwenela ukusebenzisa inkonzo yethu yasimahla yokuKopa, sithumele umyalezo okhawulezayo kwaye siza kukumisela!
2. Iimali zeDeposithi
Ngoku uyacelwa ukuba ufake imali kwiakhawunti yakho entsha ye-eToro. Elona xabiso lisezantsi kulo mthengisi li- $ 200-ubuncinci ubuncinci kutyalo-mali kwipotifoliyo yethu yokuThengisa.
Izinketho zokuhlawula ezixhaswayo kwi-eToro zibandakanya:
Ingcebiso ephezulu: Kunqande ukukhetha ucingo lwebhanki njengoko kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze imali ifike. Zonke ezinye iindlela zokuhlawula zibhalwe kwangoko!
3. Sithumele umfanekiso weskrini ukuze samkele igama lomsebenzisi le-eToro
Nje ukuba ubhalise ngeakhawunti exhaswa ngemali, kuyakufuneka uthathe umfanekiso-skrini obonisa eyakho:
Igama lomsebenzisi le-eToro
Ukuba udibene ne- $ 200 encinci yedipozithi
Qaphela, ngekhe ubhentsise naluphi na ulwazi olubalulekileyo ngokuthumela oku kungasentla. Ngokuchasene noko, onke amagama abasebenzisi kwi-eToro asesidlangalaleni. Siza kuqinisekisa ukuba igama lakho lomsebenzisi alabelwanga nabanina kwaye ngenxa yoko-imfihlo yakho ikhuselwe nge-100%.
Nje ukuba sifumane i-skrini efunekayo, siya kuthi emva koko sikuthumelele umyalezo ochaza igama lomsebenzisi lethu elikhethekileyo le-eToro.
4. Qalisa ukukopa Funda 2 Urhwebo
Nje ukuba ufumane igama lomsebenzisi le-eToro, kuya kufuneka uyikhangele. Emva koko, cofa kwindawo ethi 'Khuphela'.
Emva koko uza kubona ibhokisi ephumayo. Apha, kufuneka:
Ngenisa imali onqwenela ukuyityala kwipotifoliyo yethu yokuRhweba ngeKopi (ubuncinci be- $ 200)
Phawula ibhokisi ukukopa yonke imisebenzi yethu eqhubekayo
Nje ukuba uqinisekise oku kungasentla, uya kukopa kwangoko ipotifoliyo yethu! Ke, nakuphi na ukuthenga okanye ukuthengisa izikhundla esizenzayo kuya kubonakala kwipotifoliyo yakho.
Qaphela: Unokwenza imali ezinkozo zakho nanini na xa usikopa nge-eToro. Ngapha koko, nje ukuba usivale isikhundla, iimali ziya kufakwa kwiakhawunti yakho yemali ye-eToro kwaye ziyafumaneka ukuze zirhoxiswe.
I-eToro liqonga leeasethi ezininzi elinikezela ngotyalo-mali kwisitokhwe nakwii-cryptoassets, kunye nokuthengisa ii-CFD.
Nceda uqaphele ukuba iiCFDs zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye ziza nomngcipheko omkhulu wokulahleka kwemali ngokukhawuleza ngenxa yokuphakama. 75% yeeakhawunti zabatyali zimali abathengisa baphulukana nemali xa bethengisa iiCFDs nalo mboneleli. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uyayiqonda indlela ezisebenza ngayo ii-CFDs, kwaye nokuba ungakwazi na ukuthatha umngcipheko omkhulu wokulahlekelwa yimali yakho.
Intsebenzo yangaphambili ayibonisi iziphumo ezizayo
Iicryptoassets zizixhobo ezinokuguquguquka ezinokuguquguquka ngokubanzi ngexesha elimfutshane kakhulu kwaye ke azifanelekanga kubo bonke abatyali mali. Ngaphandle kweCFDs, ukuthengisa ii-cryptoassets akulawulwa kwaye ke akujongwanga siso nasiphi na isikhokelo solawulo se-EU.
I-eToro USA LLC ayinikezeli ngee-CFD kwaye ayimeli kwaye ayithathi xanduva malunga nokuchaneka okanye ukugqibelela komxholo wolu papasho, olulungiselelwe liqabane lethu lisebenzisa ulwazi olukhoyo olungelolungu eluntwini malunga ne-eToro.
Zeziphi iiasethi eziza kufunda ngokuGxila kwi-2 yorhwebo?
Zonke iindawo zokurhweba kwisipili se-eToro senkonzo yethu yesiginali. Oku kuthetha ukuba ufumana isibonelelo esongeziweyo sokusebenzisa i-forex yethu, imveliso, imali yedijithali, kunye neengcebiso zorhwebo- kodwa ngendlela nje. Ukuba ithuba livela, iqela lethu labarhwebi linokuthatha isigqibo sokufikelela kwezinye iiklasi zeeasethi- ezinje ngezitokhwe.
Uhlawulisa malini ngenkonzo yakho yokuKopa?
Asibizi kwanto ngenkonzo yethu yokuThengisa. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile ukuvula iakhawunti nge-eToro ngekhonkco lethu elikhethekileyo emva koko usithumele umfanekiso-skrini ochaza igama lomsebenzisi kunye nedipozithi yakho!
Ngaba imali yam ikhuselekile kwi-eToro?
Ngokuqinisekileyo. I-eToro ngumrhwebi olawulwa kakhulu obesebenza ngaphezulu kweminyaka eli-13. Iphethe iilayisensi kwiCCA (UK), ASIC (Australia), kunye neCySEC (eCyprus / eYurophu)
Unexesha elingakanani uyinxalenye yenkqubo ye-eToro Copy Trading?
Sijoyine inkqubo ye-eToro Copy Trading kutshanje ngoSeptemba 2021. Kwiiveki zokuqala ezimbalwa zokurhweba sabuyisa i-5.91%.
Ndiyixhasa njani iakhawunti yam yokuThengisa ngokuKopa?
I-eToro yamkela iindlela ezininzi zokuhlawula. Oku kubandakanya amakhadi etyala, amakhadi etyala, ii-e-wallets, kunye nocingo lwebhanki. Idipozithi encinci iyi- $ 200.
Kuthekani ukuba sele ndinayo iakhawunti ye-eToro?
Ukuba sele unayo iakhawunti ye-eToro, usakulungela ukufumana inkonzo yasimahla yokuThengisa. Sishiye umyalezo kwaye siza kukwazisa ukuba usikope njani!
Uthatha umngcipheko ongakanani xa urhweba eToro?
Iqela lethu labarhwebi abasendlwini balandela umngcipheko omnye / womvuzo njengenkonzo yethu yomqondiso. Oku kuma ku-1: 3, okuthetha ukuba sibeka emngciphekweni i-1% ukwenza i-3%.